Zimbaboe: Nianatra Ny Tsikera Mahasoa Tamin’ny Alalan’ny Fandaharana Tao Amin’ny Fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2018 3:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, 简体中文, 繁體中文, English
(Marihina fa tamin'ny 12 Janoary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Miasa miaraka amin'ireo zaza kamboty sy ankizy mahantra any Zimbaboe amin'ny alalan'ny lahatsarin'ny atrikasa, Volens, ny ONG Belza iray ary manoro hevitra azy ireo ny fomba ahafahany miatrika amim-panajana ny fanomezana sy ny fanaovana fitsikerana mahasoa. Tamin'ny alalan'ity dingana ity no nanoratan'ny ankizy, nanatontosany, nakany sary ary namoahany horonantsary fohy mampiseho fa mety hamono ny fifosana sy ny tsikera ratsy atao.
Tao amin'ny Foiben'ny Fikarakarana Ankizy ao Chiedza ao amin'ny Riandrano ao Harare, ankizy miisa dimiambinifolo teo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 18 taona no niara-niasa tamin'ny ONG ary nianatra momba ny fanatontosana horonantsary sy ny fanakianana mahasoa. Nanapa-kevitra ny handrakitra an-tsary ny misitery iray nandritra ny zava-nitranga tao amin'ny fandaharan'ny fahitalavitra izy ireo, izay nahitana ireo mpandray anjara niatrika ny fahafatesan'ny iray tamin'ireo mpikambana tao amin'ny trano Big Sistar izay nipetrahany. Toa nisy nanapoizina ity farany, ary niezaka namantatra ny olona izay namono azy izy ireo, ary nifanatrika tamin'ny vokatry ny fifosana sy ny tsikera manimba .
Tamin'ny fiafaràn'ny sarimihetsika, nanome torohevitra sy pitsony tamin'ny fomba hanomezana tsikera mahasoa amin'ny fomba tsara indrindra ny ankizy, ary ny fomba handraisana izany amin'ny lafiny tsara ihany koa.